Nin hubeysan oo bariga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dilay laba qof oo Shacab ah | raascasayrmedia.com
← Wefti uu hoggaaminayay Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo socdaal ku jooga dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta, ayaa kulamo la yeesho masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin Safiirro.
Hogaanka SSC iyo NSUM oo Heshiiyey (Daawo Khudbadihii) →
April 26, 2011 · 3:21 pm
Nin hubeysan oo bariga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dilay laba qof oo Shacab ah
Gobolka Mudug wuxuu ku dilay laba qof kaddib maanta markii uu rasaas ku furay goob ay dad badan ku sugnaayeen.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Gaalkacyo ayaa saxaafadda u sheegay in ninka hubeysan ee dilka geystay uu ahaa nin madaxa looga jiro, uuna rasaasta furay markii ay qaddar murmeen mid ka mid ah ragga ku dhintay rasaasta uu furay.
“Nin qori ku hubeysnaa ayaa rasaas ku furay goob ay dad badan ku sugnaayeen oo ku taalla xaafadda Horumar ee degmada Gaalkacyo, wuxuuna goobta ku dilay hal qof, mid kalena wuxuu u dhintay dhaawac halis ah oo soo gaaray,” ayuu yiri goobjooge ku sugnaa halka ay shaqaaqadu ka dhacday.
Ciidammo ayaa gaaray goobta ay shaqaaqadu ka dhacday, iyadoo la sheegay in ninkii hubeysnaa ee falkaas geystay uu ka baxday goobta, iyadoo ciidamadu ay ka wadaan baaritaanno ay ninkii falkaas geystay.
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo degmada Gaalkacyo ay dhawaanahan ka jireen falla ammaan xumo, taasoo sababtay in maamulka Puntland uu badalo dhammaan maamulkii ka talinayay waqooyiga degmada Gaalkacyo.